Omenala di iche na Canada | Njem zuru oke
La ọdịbendị ọdịbendị na Canada Ọ bụ otu n'ime njirimara kacha pụta ìhè na nke pụrụ iche nke ọha mmadụ nke mba a. Ọ bụghị n'efu na njedebe nke afọ iri nke afọ 70 nke mba a were ọkọlọtọ nke multiculturalism, na-aghọ otu n'ime steeti ndị kachasị kwalite mbata na ọpụpụ.
Ihe iche iche a bụ nsonazụ ọdịnala ọdịnala na ọdịbendị dị iche iche nke, dịka mba ndị si mba ọzọ si mbido ya, kpụzie njirimara Canada.
1 Mụ amaala Canada
2 Mkpụrụ obi abụọ nke Canada: British na French
3 Immigration na omenala di iche iche
4 Otuto na nkatọ
5 Omenala di iche-iche na Canada na onu ogugu
Mụ amaala Canada
na ụmụ amaala Canada, ndị a maara dị ka "mba ndị mbụ" nwere ihe karịrị agbụrụ 600 ndị na-asụ ihe dị ka asụsụ 60. Iwu nke iwu nke 1982 na-ekewa ndi mmadu a na ato ato: Ndị India, Inuit na Métis.
Ndi amaala nke Canada ("Mba ndi mbu") taa ruru ihe dika 5% nke onu ogugu ndi obodo.
E mere atụmatụ na ụmụ amaala a dịka mmadụ 1.500.000, ya bụ, ihe dịka 5% nke ngụkọta nke mba ahụ. Ihe karịrị ọkara n’ime ha bi n’obodo dị iche iche ma ọ bụ n’ebe dị iche iche.
Mkpụrụ obi abụọ nke Canada: British na French
Ugbua na narị afọ nke iri na asaa, a na-enyocha ma na-achịkwa ókèala ndị dị ugbu a na Canada british na french, na e kesara ebe ha na-anọchi anya mmetụta ha. Ọnụnọ Europe na ala ndị a mụbara na narị afọ nke XNUMX site na ebili mmiri buru ibu.
Mgbe ndị ọchịchị Canada nwesịrị nnwere onwe na 1867, iwu megidere nke ụmụ amaala nke mechara kọwaa dị ka "Ethnocide." N’ihi nke a, ọnụọgụ igwe mmadụ n’obodo ndị a belatara nke ukwuu.
Na Quebec (French na-asụ French) enwere mmetụta mba siri ike
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara afọ gara aga, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na Canada bụ otu n'ime ndị isi abụọ dị na Europe: French (ala dị iche iche na mpaghara nke Québec) na Britain. Omenala ọdịnala nke mba a dabere na mba abụọ a.
Ihe dị ka 60% nke ndị Canada nwere Bekee dịka asụsụ ala nna ha, ebe French bụ 25%.
Immigration na omenala di iche iche
Malite n’afọ 60, a gbanwere iwu na mbata na ọpụpụ nke kwadoro mbata na ọpụpụ si Europe na United States. Nke a rụpụtara iju mmiri nke ndị si Africa, Asia na Caribbean.
Ọnụ ego ọpụpụ nke Canada bụ otu n'ime ndị kachasị elu n'ụwa. A kọwara nke a site na ezi ahụike nke akụ na ụba ya (nke na-eme dị ka ihe azọrọ maka ndị si mba ndị dara ogbenye) na amụma njikọ ezinụlọ ya. N'aka nke ọzọ, Canada bụkwa otu n'ime steeti ọdịda anyanwụ nke na-anabata ndị kacha gbaa ọsọ ndụ.
Na onuogugu 2016, agbụrụ ruru iri atọ na anọ pụtara na mba ahụ. N'ime ha, iri na abuo gafere otu nde mmadụ. Omenala di iche na Canada bu ihe kachasi elu na uwa nile.
Canada ọnọdụ dị ka a multicultural mba e debara aha na 1998 na Iwu Multiculturalism nke Canada. Iwu a nyere gọọmentị Canada iwu iji hụ na steeti ahụ na-emeso ụmụ amaala ya niile nha nhata, nke ga-asọpụrụ ma mee ememme dị iche iche. N'ime ihe ndị ọzọ, iwu a na-ahụta ikike ụmụ amaala ma na-agbachitere ịha nhatanha na ikike ndị mmadụ n'agbanyeghị agbụrụ, ụcha, agbụrụ, obodo ma ọ bụ agbụrụ, okwukwe ma ọ bụ okpukperechi.
Kwa June 27, mba ahụ na-agba Daybọchị Multiculturalism.
Otuto na nkatọ
Ọdịbendị ọdịbendị na Canada taa bụ ihe ịrịba ama nke njirimara nke mba a. Na-atụle ihe atụ kachasị mma nke ọha mmadụ dị iche iche, na-anabata ndidi na imeghe ọha. Nnabata na mwebata nke ndị batara n’obodo ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nile nke ụwa bụ ihe nrite a na-amasị nke ukwuu na mpụga oke ala ya.
Agbanyeghị, mkpebi siri ike nke gọọmentị ndị sochiri Canada na multiculturalism abụwokwa ihe siri ike nyocha. Onye kacha nwee obi ọjọọ sitere na ụfọdụ mpaghara nke obodo Canada n'onwe ya, ọkachasị na mpaghara Québec.
Omenala omenala nke Canada
Ndị nkatọ na-arụ ụka na multiculturalism na-akwalite okike nke geutos ma na-agba ndị òtù nke agbụrụ dị iche iche ume ile anya n'ime ma mesie esemokwu dị n'etiti otu dị iche iche ike karịa ime ka ikike ha nwere ma ọ bụ njirimara ha dịka ụmụ amaala Canada.
Omenala di iche-iche na Canada na onu ogugu
Ọnụ ọgụgụ ndị gọọmentị Canada na-ebipụta oge niile bụ ezigbo ngosipụta nke ọdịbendị ọdịbendị nke mba ahụ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị dị ịrịba ama:
Ọnụ ọgụgụ ndị Canada (38 Nde Na 2021) Site Na Agbụrụ:
Mụ amaala America 4,9%
Ndị Africa 3,1%
Ndị Latin America 1,3%
Asụsụ ndị a na-asụ na Canada:
Bekee 56% (asụsụ gọọmentị)
French 22% (asụsụ gọọmentị)
Chinese nke 3,5%
Okpukpe dị na Canada:
Iso Christianityzọ Kraịst 67,2% (Ihe karịrị ọkara nke ndị Canada bụ ndị Katọlik na otu ụzọ n'ụzọ ise bụ ndị Protestant)
Okpukpe Hindu 1,5%
Okpukpe ndị Juu 1.0%
Ndị ọzọ 0,6%
Ihe dị ka 24% nke ndị Canada na-akọwa onwe ha dị ka ndị ekweghị na Chukwu ma ọ bụ kwupụta na ha agaghị abụ ndị na-eso ụzọ okpukperechi ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Omenala di iche na Canada